Semalt: Ndeipi Inonyanya Kuita paIndaneti Scrapers?
iyo inotsvaga injini databases kuitira nyore kuwana. Ichokwadi kuti zvigadzirwa zvekutsvaga webhutori zviri kuwana mukurumbira nenguva nokuti mushambadzi wewebhu unogadzirisa uye unogadzirisa zvose zvinokambaira nzira yekuita kuti webhupfumi yehupfumi huwane nyore kune vese vashandisi veIndaneti. Zvimwe zvekugadzira zvigadzirwa zvewebhu zvinoita kuti vashandisi varondedze kana kutamba nzvimbo dzavo kana mablogi nenzira dzakanaka uye dzinobatsira pasina chero chidikanwi chetsamba. Vanoshandurawo data yacho muzvimiro zvakasiyana uye inoenderana nezvinodiwa nevashandisi - vendita altalena da giardino. Pano tave takurukura zvimwe zvishandiso zvewebhu zvekugadzira mapepa uye zvigwaro.
1. Cyotek WebCopy
Cyotek WebCopy chirongwa chakakwana, chisingabhadharwi chekutsvaga zvinyorwa chinokubvumira kukopa saiti pane dhijitori rako kuitira kuti uverenge pasina internet connection. Iyi purogiramu inotsvaga mawebsite anotsanangurwa vasati vatora deta yavo kana kuti zvinyorwa paid disk yako. Inoshandurawo mazano kuzvinhu zvakadai semifananidzo, mapeji ewebhu, uye zvinyorwa zvepawebsite, uye kusabatanidza zvikamu zvewebhu imwechete iyo isingatauri chinhu kune injini yekutsvaga.
HTTrack chirongwa chepachena chinopa mabasa akasiyana-siyana uye zvikodzera zvakakosheswa pakutevedzera nzvimbo yose kubva paIndaneti kune kombiyuta yako kana kuti foni..Zvimwe zvezvinyorwa zvaro zvakakurumbira ndezveWindows, Sun Solaris, Unix, uye Linux. Iyi purogiramu inobvumira kuburitsa nzvimbo yako yepamusoro kanopfuura kamwechete uye inoita kuti webhuhu yekutamba iite nyore uye nokukurumidza. Iwe unogonawo kuwana ruzivo rwezvifananidzo, mafaira, HTML ma code, zvinyorwa, uyewo kupomesa kubudiswa chero nguva.
Octoparse isimba rakasununguka, rakasununguka rewebhu rinoshandiswa kubvisa zvinyorwa zvose zvaunoda kubva panzvimbo yako. Iyi purogiramu inoshandisa nzira mbiri dzekubvisa webhusaiti yako nenzira iri nani uye ine mabasa akawandisa ekubatsirwa. Maitiro ayo maviri anozivikanwa ndeye Advanced Mode uye Wizard Mode, izvo zvakakosha kuti vashanduri vashandise kuChitparse munguva yega. Iwe unogona kukopa saiti yako mukati memasekondi uchishandisa iri rakanyora. Uyezve, unogona kuchengetedza zvikwangwani mune zvakasiyana-siyana zvakarongeka zvakanaka zvakadai seExcel, HTML, uye text.
Getleft iri purogiramu isingashandisi yekushandisa iyo inobatsira kubvarura bhuti kana kuti site pakarepo. Ichakwanisa kukopa nzvimbo yako yose uye ine zvakawanda zvaungasarudza kuti ubatsirwe. Iwe unogonawo kupinda URL uye sarudza mafaira waungada kuakanda ku kombiyuta yako. Iyi purogiramu ndeimwe yepamusoro nokuti inouya mumitauro 15 yakasiyana, ine 24/7 kutsigirwa, uye inoita kuti ruzivo rwako rwekutsvaga ruve rwakanaka uye runoshamisa.
Inotumirawo data yako kuGoogle Spreadsheets panzvimbo yekombiyuta yako, kuchengetedza nguva yakawanda.